I-Playoff: Yongeza uLuhlu loLungiso kuyo nayiphi na inkqubo Martech Zone
I-Playoff: Yongeza uLuhlu loLungiso kuyo nayiphi na inkqubo
Lwesine, Disemba 13, 2018 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 14, 2018 Douglas Karr
Ukuphunyezwa Iindlela zokudlala yindlela entle yokukhuthaza usukelo lwakho ukuba uye kwinqanaba elilandelayo. Ukuba unesoftware esele ikho okanye inkqubo onqwenela ukongeza kuyo umaleko wokudlala kwaye awunaxesha lokuba neqela lakho labaphuhlisi bakhe isisombululo esipheleleyo, emva koko Dlala ngaphandle ibonelela ngokukhawuleza, ngendlela efanelekileyo. Dlala ngaphandle yimithetho enamandla yenjini enokudityaniswa ngokulula nge-SDK API kuyo nayiphi na inkqubo ekhoyo njengaleyo yokudlala.
Bandakanya abantu, Khuthaza iZenzo Ibango lokudlala, iQonga lethu lokudlala. Ivumela amashishini ukuba amilisele i-gamification dynamics kunye ne-mechanics kwiiprojekthi ngendlela elula nengqondakalayo, ekwaphula izithintelo zobugcisa. I-Playoff isebenza njenge-injini yemithetho egcina zonke iindlela "ezinzima", njenge Inqaku ukwabela, ukulandelela iintshukumo, abadlali okanye amaqela enkqubela phambili kunye neebhodi yabaphambili ekudalweni kwexesha langempela.
Kwi-Playoff ungenza, uguqule kwaye ulingise iiprojekthi ezidlalwayo ngendlela elula nenomdla, okonga ixesha kunye nemali yokutyala imali kuphuhliso kwaye ke ukunciphisa ixesha lokuthengisa. I-Playoff ikuvumela ukuba wazise ngokulula ukhuphiswano, imivuzo, ibha yenkqubela phambili, izikhuthazi kunye neebhodi yabaphambili kuzo zonke iiprojekthi ofuna ukuzibandakanya kunye nokukhuthaza abasebenzisi bakho.
Iqonga lePlayoff linezi zinto zilandelayo kunye nezibonelelo:
Iindlela zoMdlalo - Inkcazo elula yemithetho, ingqiqo, iimetrikhi kunye namabhaso
Ngokwezifiso -Yila oyilo olulungileyo ukuphucula ukubandakanyeka kosetyenziso lwakho
ulawulo - Lawula abasebenzisi ngokulula ngedeshibhodi
Teams -Yila amaqela kwaye ujonge umsebenzi weqela
Integration -Sebenzisa iiNkqubo zakho zokubulela kwii-API ezinamandla
Ulawulo lweDashboard -Jonga ukuqonda kunye nemisebenzi 'yokutya ngexesha lokwenyani
Ndiyabulela kwindalo yayo, i-Playoff SDK kunye ne-API zisebenza kuyo nayiphi na indibaniselwano ethe nkqo kuyo nayiphi na imigca yeshishini (HR, ukufunda noqeqesho, ukuthengisa, ukuthengisa, njl. Ilayisenisi isekwe kusetyenziso kunye neephakeji ezincinci, eziphakathi, okanye ezinkulu. I-Playoff ikwabonelela ngenketho yokufumana ilayisensi kwangaphambili.
Zama iPlayoff ngoku!
tags: ApiShishinigamificationDlala ngaphandlesdk
UkuCinga ngokuYila: Ukufaka isicelo seRose, iBud, iMisebenzi enameva kwiNtengiso